[Wednesday, October 4th, 17] :: Dowlada Somaliland Oo Samaysanaysa Fure Isgaadhsiineed Oo Gaar Ah
Hargeysa(RH)Wasiirka Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhsiinta Somaliland, Mustafe Faarax Abraar, ayaa shaaciyay in Jamhuuriyadda Somaliland ay ka guurayso furaha dal ku galka isgaadhsiinta ee Soomaaliya ee hore uga dhexeeyay wixii la isku odhan jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaanu xusay in Somaliland fure cusub samaysanayso.
Wasiir Abraar oo shir jaraa’id oo uu ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxaa uu hadalkiisa uu ku bilaabay;. “Socdaalkaygu wuxuu ahaa mid shaqo oo aanu ku doonaynay in aanu shirkado waawayn iyo kambaniyo dalkaa ku sugan la kulano isla markaana aanu dalka u raadino shirkado caalami ah oo aanu heshiis kula galno sidii Somaliland ay u yeelan lahayd fure isgaadhsiineed oo u gaar ah. markii aan dalkaa tagay si wanaagsan ayaa naloogu soo dhaweeyay, waxaanan la kulanay shirkado waawayn oo ay ka mid yihiin kambanigii dhisay Koosafo iyo kuwo badan oo kale waxaanan kulamo wada yeelanay madax sare oo dalkaas ah gaar ahaan wasaaradda Boosaha iyo isgaadhsiinta. socdaalkayguna wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee wefti Somaliland ka socdaa uu Lubnaan ku tago,waxaana innoo bilaabmaya xidhiidh dhow oo walaalnimo aad ayaanay u danaynayaan iskaashi aynu wadaagno waxaanan madaxdii wasaaradda Boosaha ee aanu kulanay ugu dhiibnay casuumad ay xukuumadda Somaliland u fidisay ra’iisul-wasaaraha Lubnaan oo aanu dalkeenna ku casuunay waxaanay balanqaadeen inay dhakhso jawaab uga soo bixin doonaan martiqaadkaas.